ဘိုးအင်း 767-400 ကမ္ဘာ့ဖလားခရီးစဉ် FS2004 DOWNLOAD - Rikoooo
အရွယ် 33,5 ကို MB
downloads ရယူရန္ 14 782
Author: MODEL က de Albert BOUWMAN, texture က de Ben Jones
ဘိုးအင်း 767 400 ကမ္ဘာ့ဖလားခရီးစဉ်ခြွင်းချက်အရည်အသွေးတစ်ဦးလေယာဉ်၏! ပြင်ပမော်ဒယ်အမှန်တကယ်သူတော်ကောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အဖွဲ့က IFDG ၏မြတ်သောအလုပ်အသိအမှတ်ပြုထားသည်။
အဆိုပါ panel ကိုလည်းအထင်ကြီးစရာဖြစ်ပါသည်, အရာအားလုံး functional ပါ! သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည် "Control Panel ကို။ " "Alt ကို" ကိုနှိပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် panel ကိုမှနောက်ထပ်ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုအရေအတွက်ကြည့်ရှုနှင့် "ကြည့်ရန်" နိုငျ
ဘိုးအင်း 747-200 ပြင်သစ်လေကြောင်း FS2004